Nkwupụta nzuzo a ka emelitere ikpeazụ na 28/06/2021 ma na-emetụta ụmụ amaala na ndị bi na-adịgide adịgide na European Economic Area.
Na nkwupụta nzuzo a, anyị na-akọwa ihe anyị ji data anyị nwetara banyere gị https://comme-un-pro.fr. Anyị na-akwado ka ị gụọ nkwupụta a nke ọma. Na nhazi anyị, anyị na-agbaso iwu nke iwu nzuzo. Nke a pụtara, n'etiti ihe ndị ọzọ, na:
anyị na-egosi n'ụzọ doro anya ebumnuche anyị ji arụ ọrụ data nkeonwe. Anyị na-eme nke a site na nkwupụta nzuzo a;
anyị na-ezube ịchịkọta nchịkọta nke data onwe anyị naanị na data nkeonwe dị mkpa maka ebumnuche ziri ezi;
anyị na-ebu ụzọ rịọ maka nkwenye gị iji dozie data nkeonwe gị n'okwu ndị chọrọ nkwenye gị;
anyị na-ewere usoro nchebe kwesịrị ekwesị iji kpuchido data nkeonwe gị, anyị na-achọkwa otu ndị ọzọ na-ahazi data nkeonwe anyị;
anyị na-asọpụrụ ikike gị ịlele, dozie ma ọ bụ hichapụ data nkeonwe gị ma ọ bụrụ na ịrịọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịma kpọmkwem ihe data anyị na-edebe, biko kpọtụrụ anyị.
1. Ebumnuche, data na njigide oge
1.1 Chịkọta ma nyochaa ọnụ ọgụgụ maka mmelite nke weebụsaịtị.
Maka nzube a, anyị na-eji data ndị a:
Omume onye ọbịa
Ndabere nke anyị nwere ike ịhazi data a bụ:
Oge mkparịta ụka ahụ
Anyị na-edebe data a ruo na njedebe nke ọrụ ahụ.
1.2 Inwe ike inye ngwaahịa na ọrụ ahaziri iche
2. kesa ndi ozo
Anyị na-ekerịta data a na ndị nhazi na ndị ọzọ nke atọ nke a ga-enwerịrị nkwenye nke ndị data. Nke a metụtara akụkụ (s) ndị na-esonụ:
Ndị na-edo onwe ha n'okpuru
Nzube: mmekorita ahia
Data: Ozi metụtara igodo na omume emere na saịtị ibe.
Weebụsaịtị anyị na-eji kuki. Maka ozi ndị ọzọ na kuki, biko rụtụ aka na nke anyị Iwu kuki.
4. Ndekọ ọnụ ọgụgụ
Anyị na-esochi ọnụ ọgụgụ ana-edeghị aha iji mata otu ugboro na otu ndị ọbịa si eji webụsaịtị anyị.
Anyị na-etinye aka na nchekwa nke data onwe onye. Anyị na-ewere usoro nchedo kwesịrị ekwesị iji belata mmetọ na nnweta ikike nke data onwe onye. Nke a na-eme ka o doo anya na ọ bụ naanị ndị dị mkpa nwere ohere ịnweta data gị, a na-echedo ohere ịnweta data yana na a na-enyocha usoro nchebe anyị mgbe niile.
6. Ebe nrụọrụ weebụ nke atọ
Nkwupụta nzuzo a anaghị emetụta weebụsaịtị nke atọ ndị ọzọ ejikọtara na njikọ weebụsaịtị anyị. Anyị enweghị ike ịkwado na ndị ọzọ a na-ejikwa data nkeonwe gị n'ụzọ a pụrụ ịdabere na ya ma ọ bụ nchekwa. Anyị na-akwado ka ị gụọ nkwupụta nzuzo nke weebụsaịtị ndị a tupu i jiri ha.
7. Mgbanwe na nkwupụta nzuzo a
Anyị nwere ikike ịgbanwe nkwupụta nzuzo a. Akwadoro ka ị na-akpọtụrụ nkwupụta nzuzo a oge niile iji mara mgbanwe ọ bụla nwere ike. Na mgbakwunye, anyị ga-agwa gị nke ọma oge ọ bụla enwere ike.
8. Nweta ma gbanwee data gị
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ịchọrọ ịmata ihe data nkeonwe anyị nwere banyere gị, biko kpọtụrụ anyị. Nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na iji ozi dị n'okpuru. I nwere ikike ndi a:
Dị njikere ị na-eme ka onye ọ bụla doo anya mgbe niile, ka anyị nwee ike ijide n'aka na agbanweghị ma ọ bụ ehichapụ data nke onye ọjọọ
9. Mee mkpesa
Ọ bụrụ n’ịjughi afọ ojuju etu anyị si edozi (mkpesa gbasara) nhazi data nkeonwe gị, ị nwere ikike itinye mkpesa n’aka ndị ọrụ nchebe data.
10. Onye na-ahụ maka nchekwa data
Edebanyela onye ọrụ nchebe data anyị na ndị ọrụ nchebe data na mba EU. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ arịrịọ ọ bụla gbasara nkwupụta nzuzo a ma ọ bụ maka Onye Ọrụ Nchedo Data, ị nwere ike ịkpọtụrụ Tranquillus, site na ma ọ bụ tranquillus.france@comme-un-pro.fr.
11. Nkọwa kọntaktị